IStars isisayine obengumgadli weChiefs | News24
IStars isisayine obengumgadli weChiefs
Cape Town - IFree State Stars isikuqinisekisile ukuthi isisayine obengumgadli weKaizer Chiefs, uSiphelele Mthembu, ngemuva kwenhlolokhono ehambe kahle.
Kuke kwabikwa ngaphambilini ukuthi lo mgadli sekusele kancane ukuthi ajoyine iStars, kanti manje sekuhlale obala ukuthi ikusasa lakhe uzoliqhuba kwi-Ea Lla Koto.
Lo mgadli, osedlalele zombili izinkunzi zaseSoweto, iChiefs kanye ne-Orlando Pirates, kubikwa ukuthi usayine inkontileka yonyaka owodwa kanti angase adlale uma ngabe leli qembu selitholene phezulu noSuthu emdlalweni olandelayo wePremiership.
OLUNYE UDABA: UPitso ukhala ngokulaxazwa ojoyine iPirates
Lo mdlali oneminyaka engu-30 ubudala wachitha amasizini amathathu namaGlamour Boys kodwa wakuthola kunzima ukuthi abe sohlwini lwabadlali abaqala umdlalo, kodwa-ke manje kubukeka sengathi uzothola ithuba lokubuyisa umgqigqo wakhe.
Ngale nje kokubhinjelwa yizinto kuChiefs, lo mgadli ongowokudabuka KwaZulu-Natal uyaziwa njengomdlali owashayayo amagoli kwiPremiership njengoba avalela enethini inqwaba yamagoli ngesikhathi esadlalela iPlatinum Stars ngesizini ka-2012/13 kanjalo neka-2013/14.
IStars izolibhekisa eKing Zwelithini Stadium nalapho izobhekana khona noSuthu ngoMgqibelo.